प्रोस्टेट क्यान्सर कस्ता पुरुषलाई हुन्छ र कसरी थाहा पाउने ? – ramechhapkhabar.com
प्रोस्टेटको समस्या पुरुषलाई हुने गर्दछ । महिलालाई पाठेघरको समस्या भनेजस्तै पुरुषलाई प्रोस्टेट ग्रन्थीको समस्या हुने गर्छ । पछिल्लो समय प्रोस्टेट क्यान्सरको समस्याले पुरुषहरु निकै प्रताडित हुने गरेका छन् ।
हरेक पुरुषको शरीरमा प्रोस्टेट नामक सानो ग्रन्थी मुत्राशयको नली आसपास हुन्छ । प्रोस्टेट ग्रन्थीले शुक्राणुसित मिलेर वीर्यको उत्पादन गर्ने र यसलाई तरलतामा बदल्ने कार्य गर्छ ।
उमेर ढल्केसँगै प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम पनि उच्च रहने चिकित्सकहरु बताउँछन् । यो ५० वर्ष भन्दामाथि उमेर समूहका पुरुषलाई बढी जोखिम रहने गरेको छ ।
कसरी हुन्छ प्रोस्टेट क्यान्सर ?
प्रोस्टेट ग्रन्थीका कोशिका असामान्य रुपमा बढ्दै गएर प्रोस्टेट क्यान्सर हुने गर्छ । प्रोस्टेट क्यान्सरलाई स्थानीय, एड्भान्स र मेटास्टेटिक तीन प्रकारका विभाजित गरिएको छ ।
सुरुवाती अवस्थामा रहने स्थानीय प्रोस्टेट क्यान्सरमा प्रोस्टेट ग्रन्थीमा मात्रै हुन्छ र अन्त फैलिसकेको हुँदैन । प्रोस्टेट ग्रन्थीको वरिपरिको टिस्यूमा क्यान्सर फैलिएको अवस्थालाई एडभान्स प्रोस्टेट क्यान्सर भनिन्छ भने प्रोस्टेट ग्रन्थीबाट अगाडि शरीरको अन्य भागमा समेत क्यान्सर फैलिसकेको अवस्थालाई मेटास्टेटिक प्रोस्टेट क्यान्सर भनिन्छ । प्रोस्टेट क्यान्सरको सुरुवाती अवस्थामा उपचार गरिएमा निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
वंशानुगत पनि प्रोस्टेट ग्रन्थीको समस्या हुने गर्छ । परिवारमा कसैलाई प्रोस्टेट क्यान्सर भएको छ भने सो परिवारका सदस्यहरुलाई हुने सम्भावना बढी हुन्छ । पाँच देखि दश प्रतिशत वंशाणुगत प्रोेस्टेट क्यान्सर हुने चिकित्सक बताउँछन् ।
थाहा पाउने उपाय र यसका लक्षण
सुरुवाती अवस्थामा कुनै लक्षण नदेखिने भएकाले प्रोस्टेट क्यान्सर फैलिने सम्भावना बढी हुने गर्छ । बेलैमा थाहा पाउन सकिँदैन । तर, शंकास्पद लक्षण देखिएमा चिकित्सकहाँ गएर जचाउनु पर्छ । अस्वस्थ भएको महसुस भएमा, बढी थकान महसुस भएमा, खान मन नलागेमा विशेषज्ञ चिकित्सककोमा गएर परीक्षण गराउनु पर्छ ।